Ịkpa aṅụ dị ka usoro nke Zebro: atụmatụ na nuances - Ịkpa aṅụ - 2020
Ihe ndi ozo di na teknụzụ nke na-elekọta ndị aṅụ dịka usoro Tsebro si dị
Ịzụ aṅụ bụ nkà mmụta sayensị dị mgbagwoju anya nke na-agụnye ma ihe ọmụma bara uru ma dị mkpa karịsịa.
Naanị ndị nwere obi ike na ndị raara onwe ha nye n'ezie maka azụmahịa a nwere ike, na ụzọ ndị dị irè na ọtụtụ afọ nke nyocha, ghọtara ihe ọ bụ.
Vladimir Petrovich Tsebro bụ onye na-elekọta ndị na-elekọta anụ ụlọ. Onye a na-ahụ maka ndị na-elekọta anụ na onye na-ahụ maka nkà na-ahụ anya amalitela usoro omume aṅụ aṅụ, nke a na-akpọ usoro Tsebro.
Atụmatụ mmepụta akpanwa
Nlekọta Tsebro (beekeeper kalenda)
Usoro ya dum, dabere na usoro ọganihu nke ekwo Ekwo, aṅụ na-enweghị aṅụ na arụmọrụ nke ọrụ na usoro na oge, ụzọ pụrụ iche nke ịzụlite anụ na mmeba nke apiary na-enweghị ihe ịzụta ọzọ nke ndị eze na ndị ezinụlọ, V. Tsebro kọwara na ntụziaka dị iche iche.
A maara usoro ya nke mmụba nke okpukpu atọ ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-achị anụ ọhịa na-eji oge ezumike ewepụta mmanụ aṅụ, mmeghari oge niile nke ndị eze nọ n'ọchịchị nile nke anụ ụlọ n'emeghị ka ha nweta nwa ọhụrụ, nke na-eme kwa afọ, na iji jikọta ọnụ, ka oge oyi, ezinụlọ atọ na otu site n'ike.
Dika usoro nlekota Tsebro si di, buru oke ibu, ejiji ulo nke ato kwesiri iji ya na apiary: emesia ha malitere iha oku Hives Tsebro. Ulo a nke hives na-eme ka mmepe nke umu anu na-esite na mmiri: ulo nke abuo n'elu ulo ekwo ekpuchi, ulo ahia adighi mkpa, ya mere enwere ike kewa ulo, ma oburu na enwere nwa eze nwanyi, abuo abuo di iche iche, nke nwere ike ime ka onu ogugu ndi mmadu buru ibu.
Nne nke izu abụọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịmepụta ebe abụọ, nke ga-eme ka ọrụ nke inwe akpanwa ọhụrụ dị mfe.
Site na ọkwa ọhụrụ, mepụta ezinụlọ dị iche iche siri ike dị iche - maka ya ma debe elu elu.
A na-eji etu esi eme ihe iche iche n'oge ugwo. A na-ejikọta akwara na ezinụlọ, nke na-enye gị ohere ịgbanwe obere akpanwa ochie na nwata.
Ezigbo ezinụlọ nwere àgwà mara mma kwesịrị inye nri dị mkpa (mmanụ aṅụ, perga), na-ekesa ya n'etiti okpokolo agba. A na-eme nke a mgbe mwepụ mmanụ aṅụ na ịmalite ezinụlọ.
Maka ọdịdị dị adị, ọ ga-ekwe omume ikpokọta nests site na ọtụtụ ụlọ n'oge oyi: na ebe nke abụọ etiti na ntọala, na ala - ụlọ ahịa ụlọ.
Ọ dị mkpa! Isi ihe dị n'ime aṅụ bụ ịmepụta ventilashị zuru ezu na ụlọ ndị enweghị akwụkwọ.
Oge ọzọ ị ga - achọ iji ezinụlọ dị ike. Ọ bụrụ na ị na-erube isi na nlekota nke ọma, ha ga-ewepụ ọdịdị nke ọrịa ọrịa anu.
Ịmalite ikuku na ịfụ ọkụ nke hives na ikuku ọhụrụ na-eme ka ha kwụsị ihichapụ, ọ dịghịkwa pesti nke dị ize ndụ na aṅụ na-atọ ụtọ dị ka okpomoku. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na a na-akpọ mkpụrụ ndụ ahụ mgbe niile.
N'okpuru okpokolo agba ọ dịghị mkpa maka mgbasawanye ọzọ, ebe enwere ike ịnweta ebe ịfụ ikuku oyi. Nke kachasị elu nke oghere n'okpuru etiti - atọ centimeters.
A na-atụle mmepụta nke aṅụ na alaka ụlọ ọrụ nke abụọ, ebe ọnụ ọgụgụ aṅụ bụ 1.5 ugboro dị arọ karịa na ya, na ịdị adị nke akpanwa na-enyekwa aka na nhọrọ a.
Akuku akpanwa ochie na-efunahụ ya, na n'ihi na abaghị uru ọ na-ewepụ ya, ndị fọdụrụ n'ime aṅụ ahụ laghachiri ezinụlọ.
Ọ dị mkpa! Ọ dị mkpa ka ị na-eme mgbe nile ịmebe aṅụ: nke osisi ha na-amasị "na-ata nri". Na-ekiri usoro dị otú ahụ, mmadụ nwere ike ịhazi ụzọ maka ịmegharị hives site n'otu ebe na-enye mmanụ aṅụ gaa na nke ọzọ, na-echeba oge nke okooko osisi na-amị aṅụ.
N'ime oghere abụọ, ọ ga-abụrịrị ihe grate iji mee ka akpanwa ghara ịbanye n'ime ogige dị elu, ma aṅụ ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gaghị abanye na mmiri.
Nwanyị eze na-agbanwe kwa afo. A nabatara ndị Queens kachasị mma site n'aka ndị ezinụlọ nwere ike na ike.
Ihe akpanwa, nke nwere ike ịmịpụta, nwere nnukwu afọ, nke na-adọrọ adọrọ, na mgbatị dị arọ. Akwa akpanwa, nke na-enweghị ike inye nwa, nwere etiti afọ na ụfọdụ elu.
Iji nweta àkwá, ọ dị mkpa ịhọrọ site na insulator naanị elu-elu honeycombs enweghị ntụpọ na drones. Okpokoro maka ebumnuche nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-ekpebisi ike n'ezinụlọ na-enweghị eze, ebe a na-azụlite mkpụrụ na brood nwere afọ dị iche.
Ghọta onwe gi na uzo ndi ozo.
Nke a na-enye gị ohere ịgụ na bekee aṅụ na jelii eze, bụ nke ọ na-esiri ike ikpochapụ maka afọ ndụ nke akpanwa n'ọdịnihu.
Maka mmanụ aṅụ, a na-etinye honeycombs maka ụbọchị n'otu ebe dị ọkụ na okpomọkụ nke 27 Celsius.
Ọ dị mkpa! Nke kachasị mma nke onye na-ewepụta mmanụ aṅụ bụ eletriki maka okpukpu iri abụọ na abụọ, nke ị nwere ike ịkụnye ruo na okpukpu abụọ nke mmanụ aṅụ n'otu oge. Mgbe ahụ, a ghaghị idozi ya na sieve na gauze n'ọtụtụ ebe. Usoro a na - enye aka n'ịdị ọcha mmanụ aṅụ si na pollen na wax.
A ghaghị inye ndị nwụrụ anwụ mgbe oyi na-achọ maka nnyocha iji jide n'aka na ihe kpatara ọnwụ adịghị na ọrịa ahụ.
Na nlekọta nke aṅụ, a na-atụ aro ịkwado ọrụ ahụ, dị ka kalenda si dị.
Tsebro tinye ezinụlọ iri abụọ na ise n'ebe ọ bụla, jiri ha kesaa brood - mere ya n'oge nlele ọ bụla.
Rasplod nwetara site na ezinụlọ dị na itoolu na iri n'okporo ámá, ezinụlọ nke anọ n'okporo ámá jikọtara. Maka ekpuchi nke ọ bụla, ọ na-etinye ihe a chọrọ - nkwanye ùgwù maka ogo na ike nke ezinụlọ nwere. Na nlekọta nke aṅụ, Tsebro ji otu ịbia. O ji nkà mee ihe omume nke aṅụ na mpaghara isii nke usoro ndụ ezinụlọ n'afọ nile.
Dị ka ụzọ Tsebro si dị, aṅụ kwesịrị ịdị na nsị nke mgbidi na nke nwere okpukpu abụọ na-enweghị okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti akụkụ ya site na okpokoro iri anọ na anọ na-enwe 435 site na 300 millimeters.
N'elu ihe-isi nke okpokoro iri na anọ, ị nwere ike ịrị elu nke ọzọ na okpukpu iri na otu ụzọ ise. Ulo ahụ dị n'okpuru ụlọ, nke a na-eji mbadamba mee ihe, na-aga n'ihu na mgbidi nke ekwo Ekwo, nke a na-ahazi ya maka ụlọ abụọ.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe, akụkụ aka ekpe nke usoro ihe a bụ ihe a na-ehicha ma bụrụ nke a ga-apịa. Elu ụlọ ahụ meghere n'elu ya, na-ebili ọtọ.
Mụta banyere atụmatụ nke uru nke iji mgbidi Dadan, alpine, nucleus, multicase hives na bee pavilions.
N'akụkụ akụkụ nke elu ụlọ ahụ, windo na-emechi ma kpuchie ọchịchịrị, iji mee ihe abụọ na ọkara sentimita. Ile ekwo Ekwo nwere tray nke nwere ike wepụ. Obodo nile nke Tsebro na-anọ n'ebe nile na-adịgide adịgide ma nwee ahụmahụ na-eme ka oyi nwee onwe ha. Na mbubata mmiri, nests dị n'okporo ámá iri ma ọ bụ karịa, bụ ebe ndị isi ezinụlọ dị, gbasaa na okpokoro iri na anọ.
Na nests nke ezinụlọ nna, a na-etinye mmanụ aṅụ n'ime etiti, na ebumnuche nke inweta mmalite drones. A na-ekpuchi nests ma ọ bụ akwaaji, ndị a gwara mmanụ, ndị na-azụ nri na mmiri fọdụrụ n'efu maka aṅụ.
Ị ma? Na ekwo Ekwo nwere ike ibi ndu site na iri isii ruo otu narị onu.
Ụzọ kacha mma Tsebro bụ maka ịkwado ịzụlite ụmụ eze si na àkwá dị nanị ụbọchị abụọ. Ụkpụrụ bụ isi nke usoro a bụ nkewa nke ezinụlọ site na ntanetị nke grids bu n'obi maka nzube dị otú ahụ ozugbo ezinụlọ malitere ịmalite itoolu osisi.
Mwepụ nke ụmụ eze dịka usoro nke Tsebro ga-esi dị n'ala ala. Na njedebe nke April, mgbe ihe dị ka elekere asatọ na itoolu na brood na ezinụlọ, ụlọ ọzọ nke okpokoro iri nwere ike tinye n'elu.
A na-esi n'ebe dị ala na-ebufe ha na aṅụ na otu ụzọ osisi na nri, anọ na brood na sushi anọ maka ịgha mkpụrụ, nke agwakọtara ya.
N'okpuru okpokoro ahụ, a na-etinye mkpụrụ ego iri dị ka ndị a: a na-eri nri na-eri nri, otu na ịme ihe, abụọ na brood, otu na ịme ihe, abụọ na brood, otu na ịme ihe, otu ụlọ, etiti na nri.
N'oge a, ọ dịghị mkpa ka grid maka nkewa. Ihe akpanwa si na ala, n'enweghị ọrụ n'ebe ahụ, agafere n'elu ụlọ elu.
Ihe dịka ụbọchị iri gafere, a na-efesa mmiri ndị dị na mkpịsị elu ya na akụkụ akpanwa n'ala ala, ebe aṅụ na-adabere na ntọala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-etinye okporo iji wepụ ala.
Ọ dị mkpa! A ghaghị ime ihe niile, dịka usoro Cebro si dị, na usoro ụfọdụ na-enweghị ụzọ ọ bụla, ma ọ bụrụ na esemokwu nke bilitere na ekwo Ekwo nwere ike ịkpasu ọnwụ ya.
Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ, na ezinụlọ, ndị eze na-achọpụta ma na-ejikọta ha na insulators, nke dị na mbo ahụ ma tinye ya n'etiti osisi na brood. N'ime ụbọchị ole na ole, a na-emepụta ntọala na akpanwa nke ebo.
A na-etinyekwa okpokoro anọ na aṅụ si n'ala dị n'elu na mpempe ihe ntanye tinyere aṅụ eze nwanyị site na insulator. Ihe niile kpuchie. Site na ala ala n'elu ala nri na-enweghị aṅụ n'otu ego ahụ, mmanụ aṅụ na-eji dochie ya site na insulator.
N'elu ala dị ala n'etiti okpokolo agba na brood ọ dị mkpa iji mee olulu atọ maka ogwe osisi grafting. Ezinụlọ ndị nne na nna na-aghọ ndị nkụzi.
Mbadamba osisi ndị nwere nsen abụọ ga-ewepụ ma tinye n'ime igbe, dịka ọmụmaatụ, n'ime ụgbọ ala ahụ, ebe ọ bụ na mma na-ekpo ọkụ dị iche iche na-ekewa ya na ibe nke otu cell na eserese.
A ghaghị itinye nsị, na-ahapụ otu mgbe abụọ, na-etinye ihe ndị ahụ n'elu oghere nke usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nke a ga-etinye n'ime olulu mmiri ahụ, nakwa n'ebe a na-etinye nsị na nsen abụọ n'ụbọchị. Ebe dị elu na ezinụlọ, ndị nkụzi ga-agbarịrị ọkụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụlọ obibi nke agbụrụ ahụ dị n'ebe ọzọ ma tinye ya na ekpuchi, nke nwere osisi iri, nke ga-abụ ikike nke ịzụlite ezinụlọ.
A na-ejupụta na nest na-etoju na honeycombs ruo asatọ. Mgbe ụbọchị iri abụọ agafeela ebe ọ bụ na e guzobewo ụzọ mbụ nke atọ nke hives, a ghaghị ịmalite ịtọ ntọala. N'oge a, ụbụrụ ndị eze nwanyị tozuru etozu amalitelarị.
Ọ dị mkpa ịnye otu akụkụ nke nri na otu anụ ahụ si n'aka ezinụlọ ndị bụ isi, otu brood na sushi na mmiri, wee mee ka aṅụ belata okpokoro ma daba na ala dị ala, ebe eze nwanyị ahụ nọworị.
O nwere ike ịbụ na ị ga-enwe mmasị ịmụta banyere ịzụlite aṅụ site na ịdọrọ.
Nke na-ahapụ ụmụ na-eto eto na-ahapụ bụ ọkpụkpụ azụ nke ọzọ. Mgbe ụbọchị atọ gasịrị, e kere etiti nke abụọ ma tinye ya na ọkara nke ahụ n'ihu nke mbụ: ha abụọ gbakwunye ụda eze.
Na-esote, nke ọ bụla n'ime agba a ugboro anọ n'ime ụbọchị iri na-esote ga-agbakwunye eku osisi e bipụtara. Site na mmalite nke nchịkọta mmanụ aṅụ, akwụkwọ ọhụrụ ahụ dị irè ma nwee ike weta ezigbo mmanụ aṅụ, dị ka ndị isi ezinụlọ.
Ọ bụ ezie na nkọwa dị otú ahụ, ụzọ Tsebro nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya, mana n'eziokwu ihe niile nwere ike ịnweta ma dị mfe, ihe kachasị mkpa bụ ịgbaso ntụziaka ndị ahụ kpọmkwem. Na ememe usoro a, ezinụlọ bee ọ bụla nwere ike iweta narị mmanụ aṅụ abụọ.
Anyị na-akwado gị ka ị gụọ banyere ụdị mmanụ aṅụ dịka black-maple, hawthorn, esparcetovy, linden, facelle, coriander, acacia, chestnut, buckwheat, rapeseed, clover, cypress.
Otu ihe dị mkpa dị mma maka ụzọ Tsebro bụ oke mma oyi oyi maka ndị na-achị anụ.
Ndị nna na-aṅụ aṅụ na-aghọta nke ọma ọrụ nke ịmepụta ọnọdụ kachasị mma maka oge oyi nke aṅụ aṅụ ha. Ihe niile dị iche iche nke usoro Tsebro n'okwu a dị na atụmatụ atụmatụ nke ekwo Ekwo n'onwe ya.
A na-ewu ụlọ site na ọtụtụ ụlọ ma nwee mgbidi abụọ na-enweghị mkpuchi. Nke a niile na-eme ka ha dị ka ulo ụlọ nke ụlọ a kwesịrị iwe ọkụ karịa ụlọ ndị ọzọ dị iche iche nwere otu ebe ahụ. A na-etinye ụlọ ahịa maka oyi na ekwo Ekwo, ọ bụrụ na ọ dị ezigbo mkpa. N'okpuru hives tupu mmalite nke oyi, ọ dịghị mkpa ka ị gbaa ọsọ, ha na-anọ ebe.
Na-akwadebe aṅụ maka oyi, ịkwesịrị iwepu ndị na-eri nri na ndị dọkịta, wepụ ihe niile na-ekpuchi site na hulls maka ntụrụndụ, nke mere na aṅụ na-agbada ala, dịrị n'otu ma kpoo klọb maka oyi.
Ọbụna n'oge oyi, usoro ikuku ventilasị na-ewere ọnọdụ n'ime oghere ndị dị na oghere ọnụ ụzọ na-emeghe na oghere ndị dị n 'ntaneti nke dị ntakịrị n'ogologo, nke dị n'agbata mkpọmkpọ ọkụ ndị ahụ, nke e mere maka oge oyi.
I kwesịghị ichefu ịhapụ, karịsịa maka ezinụlọ ndị siri ike, nri n'ụdị mmanụ aṅụ na perga. Teknụzụ na ụkpụrụ nke usoro Tsebro na-eme ka ndị nwe anụ ọhịa na-adị ndụ na mmiri nke mmiri na-eme.
Ị ma? Ndị na-aṅụ anaghị ehi ụra n'oge oyi, n'ihi ya, ọ dị ha mkpa inweta nri maka oyi.
Aṅụ bụ ndị e kere eke hụrụ n'anya, ọrụ ha dị mkpa na-ewere ọnọdụ dịka ụfọdụ usoro ntụrụndụ ụfọdụ dị. Ha adịghị achọ ihe efu na ejighị n'aka.
Ụmụ ahụhụ ndị a na-enwe mmetụta nke ọma na mgbanwe ọ bụla na ihu igwe, okpomọkụ na ọnọdụ ọkụ, iru mmiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Kalịnda, nke Tsebro nwetara, na-echebara nuances niile a, na-adaberekwa n'ụkpụrụ ndị bara uru nke ọrụ nke onye dere ya.
Dị ka kalenda Tsebro, na January, nyocha na ịṅa ntị otú aṅụ si eche mgbe oge oyi na-eme, a na-ewepụkwa submor, a na-emepụta mmanụ aṅụ ọhụrụ, a na-eme ka anụ ọhịa ahụ dị ọkụ, a na-enyocha mkpuchi ahụ.
Na February, ọ dị mkpa iji nyochaa aṅụ ndị na-adịghị ndụ na laabu iji ghara ịhapụ ọrịa ndị dị ka Nozematoz, Varroatosis na Ascosferosis. Nnyocha nke mbụ nke ezinụlọ ndị fọrọ nke nta ka ha lanarị oyi, na ọnọdụ ha ruru eru. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ihe kwesịrị ekwesị.
Na March, ọrụ ịkwado maka ụgbọ elu, nri, ma ọ bụrụ na ọgwụgwọ dị mkpa, Candi. Ikwesiri igosi ndi ezinulo maka ike ha. N'April, ọ dị mkpa iji wepụ ndị nwụrụ anwụ kpamkpam. Ikwesiri inyocha onu na ezinulo nile, dozie okpokolo osisi na umu mmadu n'otu n'otu maka ozo nke feeder-trough, tinye ha.
Ọ bụ n'oge a, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ dị gị mkpa ịbikọta ezinụlọ na ịchọta ndị dị otú ahụ na-enweghị akpanwa. N'April, ndị na-aṅụ aṅụ kwesịrị itinye aka na ọgwụgwọ ascospherosis.
Na Mee, e wepụrụ akpanwa ahụ, a na-emepụta ihe ndị ahụ, na nwata na-anọdụ ala. N'ọnwa June, a na-ejikọta osisi na brood, a na-ejikọta agbakwunyere ezinụlọ n'enweghị akpanwa. Site na July ruo December, a na-eme usoro, nke onye ọ bụla na-azụ anụ maara ma mee.
Ị ma? Anụ nwere anya ise: atọ dị n'elu isi, abụọ nọ n'ihu.
Mana, dị ka usoro Tsebro si dị, ọ dị mkpa ịṅa ntị na eziokwu ahụ bụ na site na ọdịda nke ndị na-achị aṅụ, e nwere nanị akụkụ abụọ nke osisi, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka a jikọta ha n'otu oge n'etiti ọnwa August: n'ihi nzụkọ nhọrọ dị otú ahụ weere ọnọdụ, ọ bụkwa nanị nwa nwanyị na-eto eto nwata Mgbe emechara ihe, ezinụlọ a ga-edozi kpamkpam, a ga-ekpocha ihe ndị ahụ na-eme ka ha dị ọcha (nke dị n'elu - osisi isii, nri anọ, na ala - naanị okpokoro ise).
Mgbe ahụ, ịkwesịrị itinye ndị na-eri nri na hives ma mepụta mkpuchi ahụ iji ohiri isi. Ọ dịkwa mkpa itinye ebe dị iche iche nke osisi dị n'etiti osisi brood iji bibiri varroatosis. Mgbe ụbọchị isii gachara, i nwere ike ịmalite ịkụnye aṅụ na syrup shuga, na mgbakwunye nke wormwood, potassium permanganate, nozemat, na ụzọ ndị ọzọ. A na-akwanyere Tsebro isi na ịkpa aṅụ nke ọma ma na-ewu ewu, ọ na-ekpebi iwu ndị dị mkpa nke apiary.
Ị ma? Usoro mmepe nke eze nwanyị eze site na akwa akwa nke onye toro eto na-ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị iri na asaa, ọ na-arụ ọrụ n'ime iri abụọ na otu, ụtụtụ na ụbọchị iri abụọ na anọ.
Nke a abughi nani usoro iwu edoziworo na akwukwo ahihia: ihe nkenke ndi ozo bu ihe nkowa, nkowa di iche iche, ihe di iche iche nke di iche iche na nke oma (kalenda, ihe odide). Usoro a abughi nani maka ndi nnocha ndi ozo, kamakwa maka ndi oru ugbua nke oma.
Mara: 5 annuals nke ga-acha oge ọkọchị
Mgbe na otú swans si ekpuchi ụmụ ha: peculiarities nke na-edebe obere swans
Agwa: ụdị na ụdị dịgasị iche iche
Akuku hydrangeas na-eto na ọdịda